January 7, 2021 - Padaethar
မိန်းကလေးတွေသိထားသင့်သော တကယ်ချစ်တဲ့ယောက်ျား နဲ့ ဟန်ဆောင်တတ်တဲ့ယောက်ျား
January 7, 2021 by Padaethar
ဘယ်ကောင်လေးမှ ရုန်းမထွက်နိုင်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့် မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မူ့ (၈)ချက်
မိန်းကလေးတွေ ဆွဲဆောင်မှု ရှိဖို့ဆိုတာ ခက်မလိုလိုနဲ့ အရမ်းကိုရိုးရှင်းပါတယ်။ တချို့သူတွေကတော့ ကိုယ်မွေးကတည်းကပါလာတဲ့အရာကို ထုတ်မသုံးတတ်ကြတာပါ။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကိုဆွဲဆောင်မှုအရှိစေဆုံးသောအရာတွေကတော့… (၁)နှုတ်ခမ်း ကိုက်တာ မိန်းကလေးတွေနှူတ်ခမ်းကိုက်လိုက်တာဟာ ယာကျ်ျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့မေတ္တာတင်မကပဲ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံက အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပါရရှိစေပါတယ်။ (၂)နူးညံ့တဲ့ အသားအရည် အသားရည်နူးညံ့တဲ့ မိန်းကလေးတွေထက် ဆွဲဆောင်မှုရှိတာ ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပဲ ရှေးခေတ်ကတည်းက အီဂျစ်လူမျိုးတွေ ရောမလူမျိူးတွေက ခန္ဓာကိုယ်အမွှေးတွေကို ရိပ်သိမ်းခဲ့ကြတာလေ။ (၃)ဆံပင်ကိုရှင်းလင်းနေအောင်ချည်ထားတာ လည်ပင်းနဲ့ နားရွက်ပေါ်အောင် ဆံပင်စည်းထားတာကလည်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ပိုပြီးတော့အထာကျစေပါတယ်။ (၄)ထူးခြားတဲ့ပုံစံ ယောက်ျားလေးတွေက ထူးဆန်းတဲ့မိန်းကလေးတွေတွေ့ရင် အရမ်းကိုခင်မင်လိုစိတ်ပြင်းပြကြတယ်။ ဆန်းသစ်တီထွင်တတ်တဲ့သူတွေဟာ လူတိုင်းကိုဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ တက်တူး တို့ ဆံပင်အပြာရောင်ဆိုးထားတာတို့ဟာ စကားစပြောဖို့အခွင့်အရေးပေးတဲ့အရာတွေပေါ့။ (၅) ပခုံး အထက်ကနေ လျှပ်တစ်ပြတ်ကြည့်လိုက်တာ ပခုံးအထက်ကနေပြီးတော့ လျှပ်တစ်ပြတ်ပဟေဠိဆန်ဆန်ကြည့်လိုက်တာက ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ နှလုံးသားကိုတလှပ်လှပ်လုပ်သွားစေတဲံအချက်ပါ။ (၆)ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လှတယ်လို့ထင်တဲ့ မိန်းကလေးဟာအခန်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ … Read more
မိန်းကလေး တွေ ကိုယ့် ချစ်သူ ကိုယ် သည်းသည်းလှုပ်ချစ်တာကို မဖော်ပြသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅)ချက်
မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူတစ်ပါးကို မလိမ်ညာဘဲ တကယ်အချစ်စစ်နဲ့ချစ်တာက အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုတာထက်ပိုပြီး ကိုယ်ချစ်နေတာကို သည်းသည်းလှုပ်မဖော်ပြသင့်ပါဘူး။ ဒီလိုမဖော်ပြသင့်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅) ချက်ကတော့ ဒီလိုပါ။ လူတိုင်းဒီလိုဖြစ်မယ်ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံး အရာတွေကို ဖော်ပြပေးထားတာပါနော် …. ။ (၁) အနိုင်ယူလာမယ် ယောက်ျားတွေဟာ ပင်ကိုဗီဇကိုက အနိုင်ယူချင်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်သာ သူ့ကို သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ပြလိုက်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် သူ့ကိုသင် အရမ်းချစ်နေတာကို သိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကို အနိုင်ယူလာတော့မှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ် ထုတ်မပြတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ. …. ။ (၂) တန်ဖိုးမထားတော့ဘူး သင့်ချစ်သူကို သူမရှိပဲမနေနိုင်တဲ့ ပုံစံလုံးဝမလုပ်ပြပါနဲ့။ ဒီပုံစံကိုမြင်သွားရင် ဒါမှမဟုတ် သင်ဒီလိုဖြစ်နေတာကို သိသွားရင် သင့်ကို အရင်လို တန်ဖိုးထားတော့မှာ … Read more
Categories ကျန်းမာရေး, ဗဟုသုတ Leaveacomment
မိန်းကလေးတွေက ရွယ်တူ/အငယ်တွေထက် ကိုကိုမှကိုကိုဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅)ချက်
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်နဲ့သက်တူရွယ်တူတွေ ၊ မောင်လေးတွေထက်စာရင် ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ ကိုကိုတွေနဲ့ပဲ ချစ်သူဖြစ်ချင်ကြတဲ့မိန်းကလေးတွေ ပိုများလာပါတယ် ။ ကိုကိုတွေကိုတော့ မိန်းကလေးတွေက အချက် (၅)ချက်ကြောင့်ရွေးချယ်လာကြတာပါ ။ ဒီအချက်လေးတွေကတော့ …. ၁. ကိုကိုတွေက လုံခြုံမှုပေးတယ် မိန်းကလေးအများစုက ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို ကိုယ်မှီခိုအားထားလို့ရမယ့်သူမျိုးပဲဖြစ်စေချင်ကြတယ် ။ သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်း လုံခြုံမှုပေးတဲ့သူမျိုး ၊ အခက်အခဲတွေကြုံလာရင်လည်း ရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးနိုင်တဲ့ အားကိုးရတဲ့သူမျိုးကိုပဲ ရွေးချယ်ချင်ကြတယ် ။ ဒီလိုအချက်တွေကို ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ ကိုကိုတွေမှာပဲတွေ့ရတတ်တယ်လေ ။ ၂. အလေးအနက်ထားပြီး လေးလေးစားစားဆက်ဆံတယ် မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ကြေကွဲဝမ်းနည်းလွယ်တယ် ။ သူတို့နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အရာတွေအကုန်လုံးကိုလည်း အလေးအနက်ထားစေချင်ကြတယ် ။ဥပမာ – မွေးနေ့တို့ ၊ ချစ်သူသက်တမ်းနှစ်ပတ်လည်တို့ ။ ဒီလိုအရာတွေကို မောင်လေးတွေက အသေးအမွှားလေးတွေဆိုပြီး မေ့လျော့နေတတ်ကြပေမယ့် … Read more
နိုင်ငံသားတိုင်း လိမ်ညာမခံရအောင် ယခု လောလောဆယ် ဖြစ်နေသော ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်ကို အသိပေးတာပါ
ကျွန်မတို့ နိုင်ငံသားများ လိမ်ညာမခံရအောင် ယခု လောလောဆယ် ဖြစ်နေသော ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်ကို အသိပေးတာပါ။ ကျွန်မတို့ အိမ်တွင် သုံးစွဲနေသော အိမ်သုံး လျှပ်စစ် မီတာပုံးများကို ခြံထိပ်တွင် ထားရှိပြီး လစဉ် လျှပ်စစ်ရုံး ဝန်ထမ်းများသာ ဖတ်ပြီ တောင်းခံသမျှကို ကျမတို့မှ မစစ်ဆေးမိပဲ ဧရာဝတီဘဏ်တွင် တပည့်များက သွားရောက် ငွေ‌သွင်းပေးပါသည်။ ပြီး‌နောက် ထွက်လာသည့် စလစ်ကို မီတာရုံးတွင် ပြန်လည် တင်ပြမှသာ အကြွေးကင်းကြောင်း စာရွက် ထုတ်ပေးပါသည်။ တောက်လျှောက် ဆောင်လာခဲ့သည်မှာ သုံးစွဲ ယူနစ် ၃၀၀၀ ကျော်၊ တစ်ခါတရံ ယူနစ် ၄၀၀၀ စွန်းစွန်း ဖြစ်သွားပါတယ်။ လစဉ် ကျပ် ၄သိန်းကျော်၊ ၅ သိန်း‌ကျော် အတွင်း … Read more
2021 ခုနှစ် ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက် တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်းလာပါပြီ
2021 ခုနှစ် ကြာသပတေးသားသမီးများ တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း ဤ2021ခုတွင် ကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ နောက်ကွယ်ကနေ ကြိုးကိုင်သင့်တဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါ တယ်။ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းသစ်များ ရရှိနိုင်ပြီး ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်လျှင် အထူးအောင်မြင် မည်။ မည်သည့်ကိစ္စမဆို လျှို့ဝှက်စွာလုပ်သင့်တဲ့ နှစ်တစ်ခုပါပဲ။ ဟောင်ဖွာ ဟောင်ဖွာနဲ့ မိမိလုပ်မယ့်ဟာ လျှောက်ပြော နေရင် သူများက ကိုယ့်ထက်ဦးအောင်လုပ်သွားတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေ ရင်းချာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဝင်ငွေ ရပေါက် ရ လမ်းများ အဆင်ပြေအောင်မြင်မည်။ ဆရာကောင်း၊ သမားကောင်းများနှင့် ကြုံတွေ့ရခက်ခဲနေမည်။ နည်းပေး လမ်းပြမယ့် ဆရာသမားကောင်းလဲ အနားမှာမရှိတဲ့ နှစ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ဝန်ထမ်း လခစားလုပ်ကိုင်ကြတဲ့ ကြာသပတေးသားသမီးတွေကတော့လိုက်လျောညီထွေစွာ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များနှင့် ပေါင်းသင်းနိုင်၍ ပိုမိုအောင် မြင်မည်။ ဒီနှစ်မှာ မှန်သည်ထင်ရာကို တစ်ဇွတ်ထိုးလုပ်ကိုင်တတ်သည့် အကျင့်ကို ပြုပြင်သင့်သည်။ ခရီးတိုလေးများ ပို့ဆောင်ပေးရတဲ့ … Read more